သတိပြုပါ: စက်တင်ဘာလအရောင်းမြှင့်တင်မှု - ဒေါ်လာ ၁၀၀ လျှင် ၅၀ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဒေါ်လာ ၅၀၀၊ ဒေါ်လာ ၃၀၀ လျှင် ၅ ဒေါ်လာကျသင့်သည်
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
Hiwin Linear လမ်းညွှန်များ
THK Linear လမ်းညွှန်များ
Linear Motion Ball Slider ယူနစ်
HXHV နက်ရှိုင်းသော groove Ball Bearing
HXHV ကြွေထည် Ball Bearings
HXHV Angular ဆက်သွယ်ရန်ဝက်ဝံ
HXHV ခေါင်းအုံး Block ကိုထမ်းရွက်
HXHV Taper ကြိတ်စက်
အခြားအ Bearings / အစိတ်အပိုင်းများ
အပူချိန်မြင့်မားသော 6206 အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ
မြင့်မားသောအပူချိန်ဝက်ဝံ၏အပူချိန်ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးသို့မထားဘူး, အများအားဖြင့် bearing နှင့်အသုံးပြုသောပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အပူချိန်ကို ၂၀၀ ဒီဂရီ၊ ၃၀၀ ဒီဂရီ၊ ၄၀ ဒီဂရီ၊ ၅၀၀ ဒီဂရီနှင့် ၆၀၀ ဒီဂရီခွဲခြားနိုင်သည်။ အသုံးများသောအပူချိန် ...
အများအားဖြင့်တုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းယေဘုယျအားဖြင့်လှိမ့်အဝိုင်းများသည်ဆူညံသံကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ များသောအားဖြင့်ခံစားရသော“ bearing noise” သည်အမှန်တကယ်ပင်ပတ် ၀ န်းကျင်တည်ဆောက်ပုံနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတုန်ခါစေသောအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဆူညံသံပြproblemနာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ...
Timken သည်လေနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစျေးကွက်များအတွက်ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
Timken, bearing နှင့် power transmission ထုတ်ကုန်များတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သူက ယခုအချိန်မှစ၍ ၂၀၂၂ အစမှသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အစီအစဉ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဟုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကြေငြာခဲ့သည်။ "ဒီနှစ်ငါ ...
Timken သည် Aurora Bearing Company ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်
20-12-09 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Timken ကုမ္ပဏီ (NYSE: TKR;) သည်ကမ္ဘာ့သယ်ဆောင်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်များတွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး Aurora Bearing Company (Aurora Bearing Company) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။ Aurora သည်တံတားအဆုံးဝက်ဝံနှင့်စက်လုံးဝဲများကိုထုတ်လုပ်သည်။
NSK Toyama အကြီးစားသယ်ဆောင်အပူကုသမှုစက်ရုံပြီးစီးခဲ့သည်
20-08-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
508/5000 Japan Seiko Corporation (နောင်တွင် NSK ဟုရည်ညွှန်းသည်) fujisawa စက်ရုံ (Huouma၊ Fujisawa City, Kanagawa Prefecture) ရှိအပူကုသမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို NSK Toyama Co. , LTD သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ (နောင်တွင် NSK Toyama ဟုလည်းခေါ်သည်)၊ NSK Group ၏လက်အောက်ခံ။ NSK Toyama ...
SKF သည် Xi 'Jiaotong တက္ကသိုလ်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်
SKF သည် Xi 'နှင့် Jiaotong တက္ကသိုလ်နှင့်ပူးပေါင်းနေသည် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၆ တွင် SKF China နည်းပညာ၏ဥက္ကPresident္ဌ Wu Fangji၊ RESEARCH နှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Pan Yunfei နှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Qian Weihua တို့ရှီသို့လာရောက် Jiaotong တက္ကသိုလ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် ...
အတွင်းအချင်း ၀ က်နှင့်အချင်းနှင့်အချင်းနှင့်အချင်းထည့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ မတော်တည့်မှုသည်များလွန်းနေပါကမိတ်လိုက်မျက်နှာပြင်သည်ဆွေမျိုးလျှောထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတွားသွားဟုခေါ်သည်။ တွားသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်မိတ်လိုက်မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
လှိမ့်သောအဝိုင်း၏ရှင်းလင်းရေးမှာကွင်းဆက်တစ်ခုနှင့်အခြားတစ်လုံးကို radial သို့မဟုတ် axial ဦး တည်သည့်လှုပ်ရှားမှုအများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ radial direction ရှိအမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကို radial clearance ဟုခေါ်သည်။ axial direction ရှိအမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကို axial clearance ဟုခေါ်သည်။ ဂျီ ...
၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် R&D ဦး စားပေးနှင့်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
bearings ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်အတွက်အဓိကစက်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချရုံသာမကဝန်ထုပ်များကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်၊ ပါဝါထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တည်နေရာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအကျိုးရှိစွာလည်ပတ်စေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြတ်အစွန်းစျေးကွက်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး ...
အလိုအလျှောက်ဆောင်သောရှင်းလင်းရေး setting များအတွက်နည်းလမ်း
20-06-28 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ကြိုတင်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအပြင် Timken သည်ရှင်းလင်းသောအငြင်းပွားမှုများ (ဥပမာ - SET-RIGHT, ACRO-SET, PROJECTA-SET, TORQUE-SET နှင့် CLAMP-SET) ကို manual Adjustment options အဖြစ်အလိုအလျောက်ချိန်ညှိရန်အသုံးများသောနည်းလမ်းငါးခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဇယား ၁- "tapered roller bearing set ၏နှိုင်းယှဉ်ချက် ... ကိုကိုးကားပါ။
အလုအယက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကပ်ရောဂါအခြေအနေ၏နှစ်ဆဖိအားအောက်တွင်လေစွမ်းအင်အဓိက ၀ င်တိုက်များ၏ထောက်ပံ့မှုသည်ရှားပါးမှု၊ ဒေသတွင်းအခွင့်အလမ်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သည်။
20-06-24 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ပူသောနေတွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၏စက်ယန္တရားသည်လူကြိုက်များသောအိမ်တွင်းစက်ရုံတစ်ခု၏ဟောက်သံနှင့်ကျောင်းသည်အလုပ်များနေခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှလေရဟတ်တာဘိုင်ထုတ်လုပ်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုသေချာစေရန်အမိန့်စာများထွက်ပေါ်လာသောအလုပ်သမားများသည်အလျင်အမြန်ပင်။ သို့သော်တူညီသောမှာ
ပုံမှန်အားဖြင့်သံချေးနှင့် Anti-oxidation lubricants
20-06-11 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
အောက်ပါစက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်သောချောဆီ၏ ASTM / ISO ထဲမှာပါတဲ့အဆင့်ဖော်ပြသည်။ ပုံ 13 စက်မှုချောဆီကို၏ထဲမှာပါတဲ့အဆင့်။ ISO Viscosity System သမားရိုးကျ Antirust နှင့် Antioxidant Lubricants သမားရိုးကျ Antirust နှင့် Antioxidant (R&O) ချောဆီများသည်အသုံးအများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
အမဲဆီ lubricated ဝက်ဝံ၏နိမ့်သောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အမဲဆီချောဆီကိုယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်မြန်နှုန်းအသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုခြင်းအားလုံးအတွက်ဆန့်သောပွတ်တိုက်အားဖြည့်သည့်အမဲဆီမရှိပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမဲဆီသာကန့်သတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ Gre ...
တရုတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအရောင်း ၀ င်ငွေပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ တင်သွင်းမှုနှင့်ပို့ကုန်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
20-05-14 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
အချက်အလက်များအရတရုတ်သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်စေ၊ ရောင်းချခြင်းဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အရာဖြစ်စေကာမူအဓိကသုတ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများ၏အဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ တရုတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်ကြီးမားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေသော်လည်း၎င်းသည်အင်အားကြီးမားသည့်နိုင်ငံမဟုတ်သေးပါ။
20-05-11 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
တစ်ခုမှာအပိုင်းသံမဏိ။ အပိုင်း၏ပုံသဏ္Accordingာန်အရ၎င်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်သံမဏိ၊ ပြားချပ်ချပ်သံမဏိ၊ စတုရန်းသံမဏိ၊ ဆhe္ဌဂံသံမဏိ၊ အတုံးလိုက်သံမဏိ၊ ထောင့်သံမဏိ၊ I-beam, channel steel၊ T-shaped သံမဏိ၊ နှစ် - သံမဏိပြား အထူရှိသောသံမဏိပြား (အထူ $% mm) နှင့်ပါးလွှာသောသံမဏိ ...
ကပ်ရောဂါအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း! ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကူးစက်မှုအရေအတွက် ၃.၉၁ သန်းကျော်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တိုးပွားလာသောရောဂါလက္ခဏာအရေအတွက်သည် ၁.၂၉ သန်းကျော်ရှိသည်။
20-05-09 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
နောက်ဆုံးပေါ်ကိန်းဂဏန်းများအရကမ္ဘာပေါ်ရှိသွေးကြောအဆုတ်အအေးမိရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုထားသောအရေအတွက်သည် ၃.၉၁ သန်းကျော်ကိုကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံတွင်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရေအတွက် (၁၀၀,၀၀၀) ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် (Unite) တွင်အတည်ပြုထားသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်သည် ...
SKF ၏ပထမသုံးလပတ် ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်
SKF ၏ဥက္ကPresident္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Alrik Danielson ကစက်ရုံများနှင့်ရုံးခန်းနေရာများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့်သာယာဝပြောမှုသည်အဓိက ဦး စားပေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါအသစ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါသည်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုကျဆင်းစေသော်လည်း ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသောလူ ဦး ရေမှာယခုအခါ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်ကျော်လွန်နေပြီး၊ ဒုက္ခရောက်နေသူများသည်သာမန်လူများဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးမကြာမီပိုကောင်းလာနိုင်သည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
Coronavirus & မျက်နှာဖုံးများ
20-03-05 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Coronavirus သစ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာသဖြင့်အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများရှားပါးလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ယခုအခါအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအမှာစာများယူနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက် info@wxhxh.com ကိုဆက်သွယ်ပါ
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထပ်မံ၍ အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုဆိုပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလီဘာဘာစတိုးတွင် ၀ ယ်ယူသူဖြစ်သည်။ https://wxhxh.en.alibaba.com/?spm=a2700.icbuShop.88.29.36f415fdzZQO82
စုံစမ်းမှုတစ်ခုခုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားစာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ ကျနော်တို့အများဆုံး 10 နာရီအတွင်းထိတွေ့ပါလိမ့်မည်။
လိပ္စာ: တရုတ်နိုင်ငံ၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ Wuxi City, Liangxi ခရိုင်၊ အမှတ် ၃၁၁ Guangnan လမ်း၊